पहिलो पटक प्रेम सम्बन्धका बारेमा पल शाहको खुलासा, ‘४ वर्ष चलेको प्रेम छुट्दा निकै मन दुख्यो’, के हो त प्रेम छुट्नुको कारण ? (भिडियो हेर्नुस्) – Taja Khawar
पहिलो पटक प्रेम सम्बन्धका बारेमा पल शाहको खुलासा, ‘४ वर्ष चलेको प्रेम छुट्दा निकै मन दुख्यो’, के हो त प्रेम छुट्नुको कारण ? (भिडियो हेर्नुस्)
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ २३, २०७८ समय: २:४५:०३
A Realistic Game That Is Blowing Up The Internet!
हाम्रो टिम नेपाल र पल शाह फाउण्डेशन मार्फत उनी सामाजिक काममा सकृय छन् । उनलाई रिल लाइफमा मात्र नभएर रियल हिरो भन्न थालिएको छ । उनलाई रियल हिरो अफ दि इयरबाट सम्मानित गरिएको छ ।
रजतपट समुहले उनलाई रियल हिरोको रुपमा सम्मान गरेको हो । ल्यामर गफ उनकै अन्तरवार्तावाट सुरु भएको थियो । प्रकाश सुवेदीले अहिले पनि उनलाई नै अतिथीका रुपमा निम्ता दिए ।
Last Updated on: July 7th, 2021 at 2:45 am